Real Madrid Ayaa Kula Biirtay Manchester United Tartanka Leon Goretzka
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid ayaa kula biirtay Manchester United tartanka Leon Goretzka
August 4, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay Manchester United kula biirtay loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga qadka dhexe ee Bayern Munich Leon Goretzka .
26 jirkaan ayaa galay sanadkiisii ​​ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa waxaana wadahadaladii uu la lahaa kooxda heysata horyaalka Bundesliga si loo kordhiyo heshiiskiisa ay hakad galeen.
Goretzka ayaan hadda ku faraxsanayn mushaharka loo soo bandhigay wuxuuna dalbanayaa qandaraas ku kacaya £ 19.5m sannadkii, heshiis la mid ah ayaa loo soo bandhigay David Alaba ka hor inta uusan ogolaanin inuu ku biiro Real Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, Bayern ayaa kaliya diyaar u ah inay u soo bandhigto xiddiga reer Jarmal heshiis ku kacaya kala bar tiradaas xilli ciyaareed kasta, taasoo ka dhigeysa Goretzka inuu hadda ka fiirsado dooqyadiisa meel kale.
Sida laga soo xigtay AS , United ayaa xiiseyneysa saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe haddii uu noqdo wakiil xor ah xagaaga soo aadan, inkastoo Real Madrid ay tahay kooxdii ugu dambeysay ee muujisay xiisaheeda.
Goretzka ayaa 32 kulan u saftay tartamada oo dhan Bayern xilli ciyaareedkii hore, isagoo dhaliyay sagaal gool siddeed kalena caawiyay.